Shiinaha faahfaahinta waayo Daboolka iyo tubbada API faahfaahinta 5CT sagaalaad saaraha Edition-2012 iyo qeybiye | Gold Sanon
API Spec 5CT-2018 Daboolka iyo tubbada
Faahfaahinta waayo Daboolka iyo tubbada API faahfaahinta 5CT sagaalaad Edition-2012
sanduuqa battariga saliid Api5ct waxaa inta badan loo isticmaalaa in lagu saliid gaadiidka, gaaska dabiiciga ah, gaaska, biyaha iyo cabitaano kale iyo gaasas, Waxaa loo qaybin karaa tuubooyin bir aan xuduud lahayn iyo biibiile steel welded. tuubooyin bir welded inta badan waxaa loola jeedaa biibiile steel welded gaadhya
Standard: 5CT API
Fasalka Group: J55, K55, N80, L80, P110, iwm
Length: R1, Red2, R3
Codsiga: moofo saliid & Daboolka tuuboyinka
daaweynta Heat: demin & caadi
Tuuboyinka Gaar ah: wadajir Gaaban
Isticmaalka: moofo saliid iyo gaaska
Biibiile in Api5ct waxaa inta badan loo isticmaalaa qodista ceelasha saliidda iyo gaaska iyo gaadiidka ee saliidda iyo gaaska. sanduuqa battariga Oil waxaa inta badan loo isticmaalaa si ay u taageeraan derbiga ceel lagu jiro iyo marka la dhameystiro ee ceelka si loo hubiyo in hawlgalka caadiga ah ee ceelka iyo dhamaystirka ceelka.
Fasalka: J55, K55, N80, L80, P110, iwm
fasalka nooca C Mn Mo Cr Ni cu P s Si
daq max daq max daq max daq max max max max max max
N80 S - - - - - - - - - - 0,030 0,030 -
R95 - - 0.45 c - 1,90 - - - - - - 0,030 0,030 0.45
L80 1 - 0,43 a - 1,90 - - - - 0,25 0,35 0,030 0,030 0.45
L80 9Cr - 0.15 0.3 0,60 0 90 1.10 8.00 10.0 0.50 0,25 0,020 0,030 1.00
L80 13Cr 0.15 0,22 0,25 1.00 - - 12.0 14,0 0.50 0,25 0,020 0,030 1.00
C90 1 - 0,35 - 1.20 0,25 b 0,85 - 1.50 0.99 - 0,020 0,030 -
T95 1 - 0,35 - 1.20 0,25 b 0,85 0 40 1.50 0.99 - 0 020 0,010 -
C110 - - 0,35 - 1.20 0,25 1.00 0,40 1.50 0.99 - 0,020 0,005 -
QI25 1 - 0,35 1.35 - 0,85 - 1.50 0.99 - 0,020 0,010 -
Qaybaha FIIRO muujiyay loo sheego in falanqaynta wax soo saarka
a content The carbon waayo, L80 ayaa laga soo kordhay laga yaabaa in 0.50% ugu badnaan haddii sheyga waa saliid-ka demayn ama polymer-ka demayn.
b content The molybdenum Fasalka C90 Nooca 1 uma dulqaadanayso ugu yaraan haddii dhumucdiisuna waxay derbiga ka yar tahay 17,78 mm.
c contect The carbon for R95 la soo kordhay laga yaabaa in 0.55% ugu badnaan haddii sheyga waa loo demiyey saliid-.
d content The molybdenum for T95 Nooca 1 waxaa hoos loo dhici karta in 0.15% ugu yaraan haddii dhumucdiisuna waxay derbiga ka yar tahay 17,78 mm.
e Waayo EW Fasalka P110, content fosfooraska, waxay noqon doontaa 0,020% ugu badnaan iyo content baaruud 0,010% ugu badnaan.
Total muruqa Under Load
Darantahay ingeega, a, c
Qeexan Wall dhumucdiisuna
Ogolyahay engegnaantiinna Variation b
12,71 in 19,04
19,05 in 25,39
a kiiska In khilaafka, shaybaarka baaritaanka engegnaantiinna Rockwell C waxaa loo isticmaali doonaa sida habka garsooraha.
b No xadka engegnaantiinna ku qeexan yihiin, laakiin kala duwanaansho ugu badan la xadiday sida ay gacanta ku soo saarta si waafaqsan 7.8 iyo 7.9.
c Waayo-derbiga baaritaano engegnaantiinna aawadeed Fasalada L80 (noocyada oo dhan), C90, T95 iyo C110, shuruudaha ku cad qiyaasta HRC yihiin tirada darantahay ingeega, celceliska ugu badnaan.
1. wax bir ah waxyaabaha ka, soo saaraha waa in la qabtaa baaritaanka siligga. Waayo, elecrtrice ku welded biibiile, depondeds on doorashada soo saaraha ee, imtixaanka siligga lagu samayn karaa on saxan bir ah in loo isticmaalo in lagu biibiile samaynaysaa ama perfomred on biibiile steel si toos ah. imtixaanka An sameeyo wax soo saarka sidoo kale loo isticmaali karaa sida baaritaanka ka soo baxay.
2. tuubooyinka baaritaanka waxaa loo xushay doonaan. Marka baaritaano badan waxaa looga baahan yahay, habka ururinta hubin doontaa in qofka shaybaarka laga soo qaaday matali karaa bilowga iyo dhammaadka wareegga daaweyn kulaylka (haddii ay khuseyso) oo labada daraf oo tuubada. Marka baaritaano badan waxaa looga baahan yahay, hannaankii meeshii laga qaadi doonaa tuubooyinka kala duwan marka laga reebo in saamiga tube awgii waxaa laga yaabaa in labada daraf oo tuubo.
3. muunad biibiile aan xuduud lahayn waxaa lagu qaadan karaa meel kasta on goobada biibiilaha, saamiga biibiile welded waa in la qaato ee ku saabsan 90 ° si kama tollayn Weld ee, ama ikhtiyaarka ah soo saaraha. Muunado ayaa laga qaadayaa at ah oo ku saabsan rubuc ka mid ah width strip ah.
4. No arrinta hor iyo ka dib tijaabo ah, haddii diyaarinta muunad lagu helo inuu haleysan yahay ama waxaa jira la'aanta qalabka tacaluqda in ujeedada tijaabo ah, saamiga waxaa laga yaabaa in la burburinayo oo bedelay muunad kale oo ka soo tube isla.
5. Haddii baaritaanka siligga matalaya Dufcaddii ah waxyaabaha aan buuxin shuruudaha, soo saaraha ka Dufcaddii isku mid ah dhuumaha dib-u-baaris laga yaabaa inay qaadato 3 tuubooyinka kale.
Haddii oo dhan kucelin ah baarka ka fuliyaan shuruudaha, Dufcaddii ee tuubooyinka waa aqoon, marka laga reebo tuubada aan u qalmayn in markii hore la waraystay.
Haddii in ka badan hal muunad waxaa markii hore la waraystay ama mid ama in ka badan baarka qaadin aadan buuxin shuruudaha ku qeexan, soo saaraha kormeeri laga yaabaa in Dufcaddii ee tuubooyinka mid mid.
Dufcaddii ugu diiday alaabta lagu kululeeyaa karo iyo reprocessed sida Dufcaddii cusub.
1. muunada Baaritaanku wuxuu noqon doonaa giraanta imtixaan ama cut dhamaadka oo aan ka yarayn 63.5mm (2-1 / 2in).
2. Tijaabada laga gooyaa, waxaa laga yaabaa in ka hor inta daaweynta kulaylka, laakiin ku xiran daaweynta kulaylka la mid ah sida biibiile wakiil. Haddii baaritaanka qaybtii waxaa loo isticmaalaa, tallaabooyinka la qaadi doonaa si loo ogaado xiriirka ka dhexeeya muunad iyo tube ururinta. foornada kasta oo Dufcaddii kasta waa in la burburiyo.
3. muunada ayaa la simay doonaa inta u dhaxaysa laba birood isku midka ah. In kasta fidsanaan tijaabooyinka, imtixaanka, mid Weld waxa dhulka la simay at 90 ° iyo kan kale simay at 0 °. muunada la simay doonaa ilaa derbiyadiinna tube ay la xiriirtay. Ka hor inta masaafada u dhaxaysa taarikada isku midka ah waa in ka yar qiimaha ay ku qeexan, ma dildilaac ama biririf waa muuqdaan in qayb ka mid ah hannaanka. Inta lagu guda jiro geeddi-socodka fidsanaan oo dhan, waa inuu jiraa ma dhismeedka masaakiinta, welds ma dhisnayd, delamination, overburning biraha, ama extrusion biraha.
5. Haddii tijaabada kasta oo wakiil ka ah tuubo aan buuxin shuruudaha ku qeexan, soo saaraha muunad ka dhamaadka isla of tube ee imtixaanka dheeriga ah qaadan kartaa ilaa shuruudaha la buuxiyo. Si kastaba ha ahaatee, oo dhererkiisu wuxuu biibiilaha way dhammaadeen ka dib markii sampling waa in aanay noqon in ka yar 80% oo dhererkeedu yahay asalka ah. Haddii mid ka mid ah saamiga tube ah oo wakiil ka ah qaybtii alaabta aan buuxin shuruudaha ku qeexan, soo saaraha ka Dufcaddii ee alaabta qaadan kartaa labada tuubbo oo dheeraad ah oo ka gooyay shaybaarka ee dib-u-baaritaanka. Haddii natiijada imtixaan kucelin intaas oo dhammu waxay la kulmaan shuruudaha, Dufcaddii ee tuubooyinka waa u qalma marka laga reebo tuubada asal ahaan soo xulay sida saamiga. Haddii mid ka mid ah baarka tijaabada kucelinta ma buuxiyaan shuruudaha ku qeexan, soo saaraha muunad laga yaabaa in tuubooyinka ka haray hal Dufcaddii by mid ka mid ah. Ikhtiyaarka ah soo saaraha, Dufcaddii mid ka mid ah dhuumaha noqon kartaa dib-u-kulaylka loola dhaqmo iyo sida baadho Dufcaddii cusub ee tuubooyinka.
1. tuubooyinka, set oo ah shaybaarka laga qaadi doonaa ka badan kasta (haddii nidaamka diiwaan ayaa lagu ogaaday in ay buuxiyaan shuruudaha sharciyeed). Haddii amarka fadhiya at A10 (SR16), tijaabo waa khasab.
2. sanduuqa battariga, 3 tuubooyinka steel waa in laga qaadaa Dufcaddii kasta tijaabo. tuubooyinka baaritaanka waxaa loo xushay doonaan, iyo habka sanbal hubin doontaa in tijaabada la siiyaa matali kara, bilowgii iyo dhammaadka wareegga daaweyn kulaylka iyo hor iyo dib ugu shishaysa gacmo lagu jiro daaweynta kulaylka.
3. Charpy V-uruursanayey imtixaanka saamaynta
4. No arrinta hor iyo ka dib tijaabo ah, haddii diyaarinta muunad lagu helo inuu haleysan yahay ama waxaa jira la'aanta qalabka tacaluqda in ujeedada tijaabo ah, saamiga waxaa laga yaabaa in la burburinayo oo bedelay muunad kale oo ka soo tube isla. Tijaabada waa in aan si fudud u xukumi haleysan si fudud sababtoo ah ma la kulmo ugu yaraan nuugo shuruudaha tamarta.
5. Haddii natiijada ka badan hal muunad ka hooseeyo ugu yaraan nuugo shuruud tamarta, ama natiijo ka mid ah saamiga ay ka yar tahay 2/3 ee ugu yar ee ku qeexan nuugo looga baahan yahay tamar, saddex shay-baarka oo dheeraad ah laga qaadi doonaa isku waslad iyo baadho. Tamarta saamaynta kasta muunada baadho sii weynaan doontaa tan ama simanyihiin inay ugu yaraan ku qeexan nuugo looga baahan yahay tamar.
6. Haddii natiijada tijaabo ah oo aan buuxin shuruudaha iyo xaaladaha ee tijaabo cusub ee aan la kulmay, ka dibna saddex-baarka oo dheeraad ah waxaa laga qaadaa kasta oo kale saddex xabbadood oo Dufcaddii. Haddii dhammaan xaaladaha dheeraad ah inay fuliyaan shuruudaha, Dufcaddii waa aqoon mid ka mid ah in marka hore ku guuldareysatay mooyee. Haddii in ka badan hal xabbo oo dheeraad ah kormeerka muu buuxin shuruudaha, soo saaraha dooran kartaa inaad kormeerto xubnihii ku haray ka mid ah Dufcaddii by mid ka mid ah, ama kululay Dufcaddii oo baadho in qaybtii cusub.
7. Haddii in ka badan mid ka mid ah saddex items bilowga ah loo baahan yahay si ay u caddeeyaan in qaybtii shahaadooyinka waxaa la diiday, dib-u-baaris lama oggola in la caddeeyo Dufcaddii ee tuubooyinka waa aqoon. Saaraha dooran kartaa inaad kormeerto ku gabal yaalla haray cad, ama kululay Dufcaddii oo baadho in qaybtii cusub .
1. biibiile kasta la hoos gelin doonaa si baaritaan cadaadis hydrostatic biibiilaha oo dhan ka dib markii adag (haddii ay haboon tahay) iyo daaweynta kulaylka final (haddii ay haboon tahay), iyo gaadhi doontaa cadaadiska ku qeexan hydrostatic aan baxsiga. waxaa markii ugu tijaabo lagu hayo cadaadis kor u dhigay in ka yar 5s. Waayo, tuubooyinka welded, ka welds ee tuubooyinka waa la baari doonaa darroor cadaadis imtixaanka. Haddii baaritaanka biibiile oo dhan ayaa la sameeyaa ugu yaraan ka hor at cadaadis loo baahan yahay xaaladda final dhamaadka biibiile, warshadaynta thread waa in la qabtaa baaritaanka a hydrostatic (ama diyaarin imtixaanka sida) on biibiile oo dhan.
2. Dhuumaha kulaylka in loola dhaqmo waa in lagu qaado imtixaan hydrostatic daaweynta final kulaylka ka dib. Cadaadiska imtixaanka ee tuubooyinka oo dhan la darafyadiisa xidhnayn noqon doonaa ugu yaraan cadaadiska imtixaanka of threads iyo qabsatooyinka.
3 .Ka dib processing in size biibiilaha guri-dhamaadka dhammeeyayna iyo wax-goysyada gaaban kulaylka-daweeyey, imtixaanka hydrostatic waa la oofiyaa ka dib dhamaadka guri ama dunta.
≥4-1 / 2 + 1% guutada ~ -0,5% guutada
Waayo, awgii tubbada si wadajir ah si wadajir ah la size a ka yar ama la mid ah 5-1 / 2, ka dulqaadka soo socda khuseeyaan dhexroor dibadda ee jirka biibiile masaafad ka mid ah qiyaastii 127mm (5.0in) ee soo socota si ay qayb ka mid ah awgii; The dulqaadka soo socda khuseeyaan dhexroor dibadda ee tube gudahood fogaan ah qiyaastii simanyihiin in dhexroorka of tube isla markiiba ku xiga si ay qayb ka awgii.
> 3-1 / 2 ~ ≤5 + 2.78mm ~ -0,75% guutada (+ 7 / 64in ~ -0,75% guutada)
> 5 ~ ≤8 5/8 + 3.18mm ~ -0,75% guutada (+ 1 / 8inches ~ -0,75% guutada)
> 8 5/8 + 3.97mm ~ -0,75% guutada (+ 5 / 32in ~ -0,75% guutada)
Waayo, tubbada awgii dibadda ah oo size a of 2-3 / 8 oo ka weyn, ka dulqaadka soo socda khuseeyaan dhexroor dibadda biibiilaha la awgii, oo dhumucdiisuna waxay si tartiib tartiib ah badala ka dhamaadka biibiile
> 4 + 2.78mm ~ -0,75% guutada (+ 7 / 64in ~ -0,75% guutada)
Wall oo dhumucdiisuna waxay:
The dulqaad oo dhumucdiisuna waxay derbiga ku qeexan biibiilaha waa -12,5%
Shaxda soo socota waa shuruudaha miisaanka dulqaad caadiga ah. Marka dhumucdiisuna waxay derbiga ugu yaraan ku qeexan waa ka weyn yahay ama la mid ah 90% ka mid ah oo dhumucdiisuna waxay derbiga ku cad, xadka sare ee dulqaad mass of hal xidid waa in la kordhiyo si + 10%
Hal Guri + 6.5 ~ -3,5
Load Vehicle Weigh≥18144kg (40000lb) -1,75%
Load Vehicle miisaan <18144kg (40000lb) -3,5%
Order Quantity≥18144kg (40000lb) -1,75%
Order Quantity <18144kg (40000lb) -3,5%
Previous: Dhuumaha kuleeliyaha aan xuduud lahayn Daawaha Steel Superheater daawaha tuubooyinka Heat Iskubedelka Tubooyinka
Next: Xuduud lahayn Dhexdhexaad kuleeliyaha steel carbon iyo Superheat tuubooyinka caadiga ah A210 ASTM
API 5CT biibiile steel
biibiile sanduuqa battariga
N80 tube sanduuqa battariga moofo